एक असामान्य appetizer कसरी बनाउने? व्यञ्जनहरु
छुट्टी तालिकाको लागि खाजा असामान्य धेरै फरक सामाग्री समावेश गर्न सक्छ। आज हामी जस्तो देखिने incongruous उत्पादनहरु को संयोजन समावेश केही व्यञ्जनहरु प्रस्तुत।
हामी लसुन र kiwi संग स्यान्डविच बनाउन
यस चाड खाने को लागि खाजा असामान्य विभिन्न तरिकामा तयार गर्न सकिन्छ। तर Housewives को सबै भन्दा सजिलो र सरल व्यञ्जनहरु लागि आफ्नो प्राथमिकता दिनुहोस्।
त्यसैले, लसुन र kiwi संग असामान्य स्यान्डविच बनाउन, हामी आवश्यक:
ताजा र नरम kiwi - 2-4 पीसी;।
एक धमकी दिन अन्डा मा उच्च क्यालोरी मेयोनेज - 150 ग्राम;
सानो baguette उत्पादन हिजो - 1 पीसी;।
लसुन chives -3टुक्रा।
घरमा बनाएको खाजा असामान्य, आफ्नो छुट्टी तालिका सजाउनु निश्चित हुन र अतिथि प्रसन्न हुनेछ। लसुन र kiwi संग स्यान्डविच तयार गर्न, तपाईं मात्र केही मिनेट आवश्यक छ। पहिलो हामी चटनी तयार गर्न आवश्यक छ। यो गर्न, भूसी देखि लसुन लौंग सफा र राम्रो grater मा rubbed। तिनीहरूलाई अर्को मेयोनेज थपियो र ध्यानपूर्वक हलचल छन्।
पनि अलग धोए र एक नरम र पाकेको kiwi संग साफ। यसलाई5मिलिमिटरमा बाक्लो को स्लाइस मा कटौती गरिएको छ।
को baguette लागि, यो स्लाइस कटा। आफ्नो मोटाइ आधा सेन्टिमिटर भन्दा बढी हुँदैन।
सबै उत्पादनहरु विकास गरिनेछ पछि, स्यान्डविच गठन गर्न थाल्छन्। यो गर्न, baguette को स्लाइस kiwi दुई स्लाइस संग लसुन सस र कवर संग गंदा। एक पाक पानामा थप उत्पादन प्रसार र एक ओवन राख्नुभयो। 225 डिग्री को एक तापमान मा स्यान्डविच7मिनेट सुकेको। तिनीहरूले त्यसपछि, बाहिर लिएको छन् प्लेट मा फैलाउन र तालिका प्रस्तुत cooled,।
tartlets तयार सुन्तला, चिकन संग र पाइन नट
असामान्य नाश्ता छैन आँखा एक अतिथि मात्र खुसी छन्, तर पनि यो एक विशेष स्वाद दिन।
सुन्तला, चिकन र पाइन नट संग tartlets बनाउन हामीले आवश्यक:
ताजा मीठा सुन्ताला - 1 फल;
चिकन - 200 ग्राम;
को धमकी दिन अन्डा मा क्यालोरी मेयोनेज -2ठूलो चम्मच;
पाइन नट, पोलेको र खुली - 1 ठूलो चम्चा;
बालुवा tartlets - रूपमा चाहिएको छ।
तयारी को विधि
बिदाहरू असामान्य नाश्ता मादक पेय संग राम्ररी जानुहोस्। तिनीहरूले स्वाद बन्द सेट र एक विशेष भावना दिनुहोस्।
सुन्तला, चिकन र पाइन नट संग tartlets तयार, स्तन संग धोए र नुनीन पानी तिनीहरूलाई जोश गर्नुपर्छ। अर्को, मासु गैर-खाद्य तत्व र सूक्ष्मता टुकडे करो अलग हुनुपर्छ।
पनि यो सुन्तला बोक्रा र फिलिमहरु देखि अलग साफ गर्न आवश्यक छ। फल को fleshy भाग चोट र छाती थपियो हुनुपर्छ।
को घटक हलचल, तिनीहरूले उच्च क्यालोरी मेयोनेज र कर्मियों पागल बाहिर राख्नु। यी कार्यहरू फलस्वरूप, तपाईं राम्रो मोटी र सुगन्धित ठूलो प्राप्त गर्न आवश्यक छ। यो बालुवा tarts, जो, बारी मा, एक platter मा फैलाउन भन्दा फैलियो।
अब तपाईं एउटा असामान्य appetizer कसरी तयार थाहा छ। यस चाड खाने को लागि तयार प्रक्रिया यी व्यञ्जनहरु प्रयोग, तपाईं पक्का आफ्नो अतिथि को सबै खुसी हुनेछ छन्।
Ling - माछा धेरै स्वादिष्ट र बहुमुखी छ
एक दुइ बयलर मा आमलेट: छिटो र सहयोगी
फ्रान्सेली भोजन को शोधन - फ्रेंच चिकन
तरकारी संग मैकेरल: व्यञ्जनहरु
सरल र मौलिक: ओवन मा दही मा चिकन
Chum सामन लागि ओवन मा Bake: केही पाक रहस्य
फेसनदार इटालियन हैंडबैग, 2011 AND 2012
यो के तापमान तल गोली आवश्यक छ?
मशरूम चोप्स: बटवाटको साथ नुहाउनुहोस्
क्लारा Zetkin: जीवनी र व्यक्तिगत जीवन
Hotel Atlantic Oasis। साइप्रस। विवरण र समीक्षाहरू
नालीदार कागज देखि गुलाब - आफ्नै हातले एक असामान्य bouquets सिर्जना गर्न
साँचो पेशेवर विवाह फोटोग्राफर कसरी छनौट गर्न
उच्च रक्तचाप के लोक साँच्चै प्रभावकारी उपचार
अद्भुत सुन्दरता: पानी फोटोग्राफी को प्रतियोगिता को विजेता
दुलही र दुलहा लागि एक प्रतियोगिता छनौट